असाेज २१ सम्म जनयुद्ध जारी छ ? भिडियाे सहित::Radio Chhahari
असाेज २१ सम्म जनयुद्ध जारी छ ? भिडियाे सहित
काठमाण्डौ असाेज ७ रेडियो छहारी डट कम
असाेज ५ देखी सर्वनाम थिएटर कालिकास्थानमा मञ्चन सुरु भएको नाटक जनयुद्ध जारी छ ? असाेज २१ सम्म जारी रहनेछ ।
नाटक जनयुद्ध जारी छ ? रंगकर्मी राज शाहले लेखन तथा निर्देशन गरेका हुन्न । नाटक जनयुद्द जारी छ ? मा बिषेश गरेर दश बर्षे जनयुद्धकाे कथालाइ समेटिएकाे छ ।
शाहले परिकल्पना गरेको यस नाटकको मञ्च निर्माण आदित्य शर्मा, रुपेन्द्र शिवाकोटी, सुरेश श्रेष्ठ र अभिषेक ढकालले गरेका हुन् । नाटकमा बन्दुकको रुपमा बैशाखीलाई प्रयोग गरिएको छ ।
नाटकमा सुजिता अधिकारी, शर्मिला नगरकोटी, सुदर्शन अर्याल, मनोज महर्जन, ईन्द्रबहादुर चौधरी, मुकेश हमाल, पासलाक्पा शेर्पा, धिरज थापा मगर, कृष्ण खड्का, शोभा लिम्बु, आशिष काफ्ले, मोहन श्रेष्ठ र नमराज पराजुलीको अभिनय रहेको छ भने शाह आफै पनि मुख्य भुमिकामा देखिएका छन् ।
यसैगरी नेपथ्यमा आरुषजंग सारु, दिनेश थापा, बिन्दु बिएम, नरेन भट्टराई, जनक साउद, आशिष बस्न्यात र सुनिता वाँडे छन् । सुजिता अधिकारीको भेषभुषा रहेका नाटकको सञ्चार संयोजन मोहन अभिलाषी र रामकुमार शाहीले गरेका छन् ।
शाहले यस अघि वैदेशिक रोजगारले ल्याएको विकृति समेटेको नाटक जिम्दा सपना र जातिय विभेद विरुद्धको नाटक बुख्याचा मन को लेखन तथा निर्देशन गरिसकेका छन् । नाटक बिहीबारबाहेक हरेक दिन साँझ ५ः१५ बजे मञ्चन हुनेछ भने नाटकको अतिरिक्त शो शुक्रबार, शनिबार र आइतबार दिउँसो १ बजे पनि हुने शाह बताउँछन् ।